Las Médulas, Ihe Nketa Worldwa | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | León, Ihe ị ga-ahụ
España O nwere otutu odidi mara mma ma ufodu abughi oru okike kama nke mmadu na oru ya mgbe nile n'uwa. Nke a bụ ihe gbasara ọdịdị ala a na-akpọ Las Medulas, otu n'ime akụ nke Castile na Leon.
Las Médulas ke ikpehe El Bierzo, ke León, na odida obodo e sculpted si Ngwuputa ndị Rom buuru. Kemgbe 1997 ka a na-atụle ya Ihe Nketa Uwa na ebe ọ bụ na 2002 Natural Ncheta nke Spain. You maara ya?
2 Nleta Las Médulas
Mpaghara a na-ezobe ọla edo na ya Ọ bụghị naanị ndị Rom erigbuola ya, kamakwa ndị ndị bu ya ụzọ onye chọtara saịtị ahụ. Mana obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ndị Rom ahụ na-erigbu ebe ahụ mgbe niile. Ekwenyere na nrigbu ahụ malitere n'oge eze ukwu Octavian Augustus n'etiti afọ 26 na 19 BC, oge nke mmeri ndị Rom meriri na mmiri.
Pliny the Elder, onye edemede Latin na onye agha nwụrụ na 79 AD, ekwuru na gas gas sitere na ntiwapụ nke Vesuvius, ọ bụ onye nchịkwa nke mines mgbe ọ bụ nwata. O kwuru na ihe dị ka puku iri abụọ nke ọla dị oké ọnụ ahịa na-ahapụ ihe ndị a kwa afọ, na ihe dị ka puku ndị ọrụ iri puku isii na-arụ ọrụ, ya bụ, ndị a tọhapụrụ na mbụ, ndị nweere onwe ha ugbu a, ndị ga-arụ ọrụ iji kwado onwe ha.
A gbahapụrụ ego ọla edo na narị afọ nke atọ na-enweghị ọrụ mmadụ, ahịhịa na-aga n'ihu n'okpuru iwu ya. Mgbe ahụ bịara akuku ugbo, nke rụrụ ọrụ iji nye ndị ọrụ nri na ndị osisi ha mechara gaa na-ewu mpaghara, a ka nwere ihe atụ ochie taa, yabụ na njedebe na oge na-aga ebe ọdịda ala dị n'etiti ọbara ọbara na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke nwere lagoons.
Mgbe a chọrọ Las Médulas ka ọ bụrụ ebe a na-edebe ihe nketa ụwa, ndị nnọchi anya Thai megidere ya n'ihi na ọ bụghị ihe sitere na okike kama ọ bụ aka mmadụ, nrigbu ya jọgburu onwe ya, mana ọ mechara banye n'ọnọdụ ya.
Nleta Las Médulas
Ọ bụrụ na ịmaghị akụkọ ihe mere eme nke ebe ahụ tupu ụzọ kachasị mma iji malite nleta bụ site na Klas nke Archaeological. Nke a bụ ebe anyị na-amụta banyere nrigbu nke ọla edo, ọrụ injinia dị mkpa maka nke ahụ, otu ndị Rom si mee ka mmiri ahụ gaa na etu ọrụ a siri gbanwee ala ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ. N'ụzọ bụ isi, usoro ndị Rom gụnyere ịtọghe ugwu na ịnakọta ọlaedo ahụ site na ịza ya.
A na-akpọ usoro ahụ Mbibi Montium ma ọ gụnyere iwu nke ọwa-mmiri iji weta mmiri site n’elu-ugwu ndị dị elu ma debe ya n’ugwu ndị a ga-erigbu. Na nke ikpeazụ, e mepụtara veranda cul-de-sac, mgbe ahụ a wụsara mmiri ahụ, ikuku ikuku gbagoro na na njedebe ugwu ahụ gbawara. Mgbe ahụ, a na-asacha ụrọ na mmiri ahụ na ọwa mmiri wee wepụta ọla edo ahụ mgbe ha nyochachara nke ahụ na ngalaba heather.
Mgbe afọ 200 dị otú ahụ na-arụ ọrụ odida obodo gbanwere nke ukwuu. E wepụrụ nnukwu mpịakọta nke ihe ma chịkọbara na ndagwurugwu ahụ, kpuchie ihe ndị sitere n'okike nke mmiri ahụ, e mepụtara ọdọ mmiri dị ka nsonaazụ na ụrọ nke ụdị dị iche iche amụrụ, baptizim ọnụ ọnụ.
Ugbu a ọ bụrụ na akụkụ a nke akụkọ ahụ enweghị ihe ọ pụtara nye gị, ị nwere ike ịnụ ụtọ echiche ndị ahụ. Maka na ebe kachasị mma bụ Orellán ele ihe anya, nke dị n’obodo nke otu aha ahụ, mgbe ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ bụ oge kachasị mma iji mee ya. Mgbe ahụ ị gbakwunye Ebe Nleta Ndị ọbịa nke bụ ebe o kwere omume ụzọ nleta nke mpaghara, nwere ma ọ bụ na-enweghị onye ndu.
Rozọ ndị a dị ogologo ma ọ bụ karịa, dabere na mmasị gị, ọnọdụ ahụ gị, oge gị, n'agbanyeghị na ha na-atụ aro ịnwe ma ọ dịkarịa ala ụbọchị abụọ maka nleta ahụ. Enwere ụzọ ise enwere ike: Zọ Perimetral, Vzọ Valiñas, Sumido Lake Path, Convents Path and Villages Route.
Zọ Perimeta: nke a bụ ụzọ kachasị ogologo ma yabụ nke kachasị mma ma ọ bụrụ na ịnwe oge n'ihi na ị na-ahụ ihe niile. Na-enye ozi gbasara ngwupụta ndị Rom, otu esi akpụ ala mmiri na ọdọ mmiri site n'iji mmiri mee ihe a.
Zọ nke Valiñas: Ọ bụ ụzọ a ma ama ma dịkwa mfe nke na-emetụ isi ihe nke mpaghara ahụ dị ka ọgba nke La Encantada na La Cuevana, isi mmalite nke Tía Viviana, obodo Las Médulas, nke m n'onwe ya, osisi chestnut ...
Ọdọ Mmiri Sumido Trail: na obere oge ọ bụ ụzọ dị mma nke gụnyere Mirador de Chao de Maseiros na echiche ya dị egwu. Routezọ ahụ na-agafe ọtụtụ ọdọ mmiri mmiri, nke mmiri mmiri mmiri na-erigbu site na ịpụpụ ọwa ma ọ bụ ọla edo. N’ezie, Ọdọ Mmiri Sumido na-abụbu ebe a na-asacha, nke bụ otu n ’otu narị kilomita na ntanetị, gwuru ọtụtụ ugboro na okwute, nke mere ka mmiri si n’ugwu ndị kachasị elu weta ma debe ya maka mmegbu ọzọ.
Ofzọ nke Convents: Nwere ike ịnweta ya site na Orellán ma ọ bụ site n'okporo ụzọ n'onwe ya ma ọ bụ ụzọ agbakwunye na tozọ Perimetral. Nke a akpan akpan nzọ ụkwụ na-enye anyị ihe ọmụma banyere ụfọdụ akpan akpan usoro ndị e ji mee ihe na Roman na Ngwuputa, na "Mbibi Montium" ma ọ bụ convergent etinyerịrị.
Utezọ Obodo Nta: Ọ bụ ụzọ na-akpọghachite anyị n'oge, na oge nke Alaeze Ukwu Rom, na otu esi egwupụta ihe ndị metụtara ya na obodo na ala.
Kedu ụzọ ọ bụla ị họọrọ, ọdịdị ala ahụ mara mma ma na-enye gị ohere ịbanye na akụkọ ntolite ma tụgharịa uche n'otú omume anyị na okike si gbanwee ya. Maka ka mma na ka njọ. Ga-ahụ mkpọmkpọ ebe nke Roman kamakwa osisi buru ibu na narị afọ gara aga, ụfọdụ ụdị dị narị afọ isii, dịka ọmụmaatụ. A mara mma. Dị ka anyị kwuru, Nwere ike ịhọrọ ịme nleta ahụ n'onwe gị ma ọ bụ mee njem nlegharị anya nke nwere ike ịbụ site na 4x4 ụgbọala ma ọ bụ obere ụgbọ ala.
Onweghi uzo esi abanye na Las Médulas mana ebe ahu di nma. Ee n'ezie, enweghị ụgbọ njem ọha na eze n'ime mpaghara ahụSite na njem ọhaneze ị nwere ike ịbanye Ponferrada na bọs nke ụlọ ọrụ AUPSA. I nwekwara ike banye n'ụgbọ okporo ígwè.
Ozi bara uru banyere Las Médulas
Nleta kachasị mma bụ n'oge mgbụsị akwụkwọ, oge nke afọ nwere agba dị egwu.
Ebe nleta ndị ọbịa dị na Las Médulas. Nọmba ekwentị ya bụ 987 420 708 619 258 355.
Interlọ Ọrụ Ntugharị nke Ọwa mmiri dị n'obodo Puente Domingo Flórez. Nọmba ekwentị ha bụ 987 460 371. Ntinye bụ n'efu.
Na-esote Mirador de Orellán bụ Galería de Orellán. Ntinye na-akwụ ụgwọ euro 2 maka okenye na 1 kwa nwata.
Klas nke Archaeological dị na Las Médulas, na Carrucedo 2442. Nọmba ekwentị ha bụ 987 40 19 54. Ahịa: euro 2 maka okenye na euro 1,5 maka ndị lara ezumike nka. Upmụaka ruo afọ 8 adịghị akwụ ụgwọ. A na-ahazi njegharị na-eduzi site na ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » León » Las Médulas, Ihe Nketa Worldwa